Забур 75 CARS - Nnwom 75 AKCB
1Onyankopɔn, yɛda wo ase,
yɛda wo ase, efisɛ wo Din abɛn;
nnipa ka wʼanwonwade kyerɛ.
2Woka se, “Me na mehyɛɛ bere a ɛsɛ no;
ɛyɛ me na mibu atɛntrenee.
3Sɛ asase ne so nnipa nyinaa wosow a,
4Meka kyerɛ ahantanfo se, ‘Monnhoahoa mo ho bio,’
na meka kyerɛ amumɔyɛfo nso se, ‘Mommma mo mmɛn so.
mommfa animtiaabu nkasa.’ ”
6Obiara mmfi apuei anaa atɔe
anaa sare no so a obetumi ama obi so.
7Ɛyɛ Onyankopɔn na obu atɛn:
Ɔbrɛ ɔbaako ase, na ɔma ɔfoforo so.
nsa bi a etwa ahuru a wɔde nnuhuam afra ahyɛ no ma;
ohwie, na asase so amumɔyɛfo nyinaa
nom ma ɛka ase puw.
9Me de, mɛpae mu aka eyi daa daa;
mɛto ayeyi dwom ama Yakob Nyankopɔn.
10Mebubu amumɔyɛfo nyinaa mmɛn,
na atreneefo mmɛn de, wɔbɛma so.
AKCB : Nnwom 75